Mogadishu Journal » 2019 » July » 17
Khayre oo Ku baaqay in Wadajir looga qeyb qaato dib-u-dhiska Galmudug
Mjournal :-Bulshada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad gobaleedka Galmudug ayaa duleedka magaalada qado sharaf mahad celin ah ugu sameeyay Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) mudane Xasan Cali Khayre oo deegaannada Galmudug u jooga dhismaha Galmudug...
Mjournal :-Waxaa Caawa Koonfurta Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug lagu dilay mid ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Mudug. Suldan Cabdulahi Suldaan Cabdiraxman ayaa lagu magacaabi jiray Nabadoonka la dilay, waxaana dilka u geystay koox ku hubeysan Bastoolado....
Farmaajo oo magacaabay Guddiga dhab u heshiisiinta iyo Wada Hadalada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland
Mjournal :-Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay Guddiga Dhab u heshiisiinta iyo Wada Hadalada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. Xubnaha guddiga ayaa ka kooban lix xubnood oo isugu jira...
Weerar khasaare sababay oo ka dhacay dulleedka degmada Balcad
Mjournal :-Maleeshiyaad hubeysan ayaa duleedka degada balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ay ku rasaaseeyeen gaari ay saaranayeen dad Shacabka,waxaana rasaastaas ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Gaariga la rasaaseeyay oo ahaa Nooca Soomaalida u taqaano...
Mjournal :-Warar dheerad ah ayaa kasoo baxaya qarax khasaaro kala duwan geystay oo Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya lagula eegtay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay Gaadiid ay la...
Mjournal :-The United States on Tuesday banned visits by Myanmar’s army chief and three other top officers due to their role in the “ethnic cleansing” of the Rohingya minority, urging accountability for their brutal campaign. The United States on Tuesday banned...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa uu xilkii ka qaaday Agaasimihii Ciidanka Badda Puntland ee ee PMPF Cabdiraxmaan Xaaji Xassan, isaga oo Magacaabay Agaasime Cusub. Wareegto kasoo baxday Xafiiska Madaxweyne Siciid Deni oo aan...
Mjournal :-Magalada Jowhar ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Hir-Shabeell waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminayo Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan , iyada oo siweyn loo soo dhaweeyay. Madaxweynaha Hir-Shabeelle ,Madaxweyne kuxigeenka iyo masuuliyiin kale ayaa garoonka...
Mjournal :-Munaasabad xalay ka dhacday Dugsiga Tababarka Booliska ee Jen. Kaahiye ayaa waxaa lagu dalacsiiyay Saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir, kuwaasoo isugu jira qaar ka mid ah Taliyeyaasha Booliska degmooyinka, Taliye qeybeedyo iyo Taliyaha qeybta Guud ee...
Mjournal :-Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta XFS ayaa shaacisay in sanadkaan wasaaraddu ay aad u hibisay adeegyada ay helayaan xujeyda Soomaaliyeed ee soo gudanaya sanadkaan waajibaadka xajka. Mudane Cismaan Aaadan (Dhuubow) Wasiir kuxigeenka wasaaradda Awqaafta Xukuumadda...
Mjournal :-Codeyn qarsoodi ah oo ay sameeyeen guddiga Midowga Yurub ayaa madaxweynaha gudigaasi ugu doortay haweeneydii ugu horeysay ee xilkaasi qabata,taasi oo ah Ursula von der Leyen oo u dhalatay dalka Jarmalka. Madaxweynaah cusub ee Guddiga Midowga Yurub Ursula von der Leyen...